ट्वाईलेटमा बच्चा जन्माएर चुप चाप क्लासमा बसिन् ९ कक्षाकी यी छात्रा (भिडियो सहित) – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र ०८, २०७८ समय: १४:५१:५२
August 24, 2021 3387
इन्टरनेट जब सुरु भयो सबै कुरा बद्लियो र ज्ञान सबैमा समान रूपमा पुग्यो । तर यो इन्टरनेट को सिकार भए आजका नौ जवानहरू । जब इन्टरनेट मोबाइल सम्म पुग्यो साना, साना स्कूल पढ्ने बच्चाहरूको हातमा पनि पुग्यो । इन्टरनेटले यति असर पार्यो यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ ।
समाजमा यति धेरै असर परी सक्यो कि इन्टरनेटको असरले बच्चाहरूको भविष्य अन्धकार भैराछ । यो भिडियो हेर्नु होला । यो भिडियो हेरेर को कदम अगाडी बढाउन लाई रोक्न सकियोस् । धेरै आमाबाबुलाई यो थाहा होस् कि इन्टरनेटको कारण के भइरहेको छ ।
यो घट`ना हो चिनको । चिनको एग्रीकल्चर वकेशनल कलेजमा एक दिन एउटा लेडिज कलेज को बाथरूममा जाँदा एउटा सानो बच्चा रोएको आवाज आउँछ ।जब मान्छेहरूले लेडिज ट्वाईलेटको ढोका खोले र उनीहरूले त्या जे देखें हैरान भए । एउटा सानो बच्चा ट्वाइटेट को सिटमा फसेको थियो र कराईरहेको थियो ।
उसलाई निकालेर हस्पि`टल लगे । तर मान्छेहरू यो सोच्न थाले आखिर यो बच्चा आयो ? कसको बच्चा हो ? सि.सि टि. भि फोटेज बाट थाहा भयो की एउटा केटी त्यो ट्वाईलेटमा गएकी रहिछिन् । जब त्यो केटीलाई बोलाएर शोधपुछ गर्दा तब उसले भनिन् । यो बच्चा मेरो हो ।
यी केटी नौ महिनादेखि प्रेगनेन्ट रैछिन । उसले यो कुरा लुकाएकी रहेछिन
आफ्नो रूममेट लाई पनि । एक दिन अचान`क उसको पेटमा दुख्न थालेछ र उ कुदेर लेडिज ट्वाइलेटमा गएकी थिइन् र त्यहाँ उसले बच्चालाई जन्म दिइन् । उनले बच्चाको नाललाई का`टेर बच्चालाई ट्वाईलेटमा फालेकी रहिछिन् ।
यति सानो बच्चालाई यसरी फालियो भने हामीले बच्चाको महत्त्व नै बुझ्न सक्दैनौं। यो केटीले अन्जानमा जिन्दगी ब`र्बाद बनाइरहेकी थिइन्। जरुरी थियो कि उसलाई सहि बाटोमा हिँडाउन परिवारको जरुरी थियो । तर उसलाई मिलिरहेको थिएन,। त्यसैले से`न्सर गर्न जरुरी छइन्टरनेट लाई ।
Last Updated on: August 24th, 2021 at 2:51 pm